Ka hortaga iyo Xakameynta Caabuqa (IPC) ee loogu tallogalay Fayraska
Ka hortaga iyo Xakameynta Caabuqa (IPC) ee loogu tallogalay Fayraska COVID-19
Koorsadaan waxay ku bixisaa warbixin xarumahee ayaa aheyd inay sameyso u diyaar garowga ka jawaabida dacwada fayraska neefsashada imaanayo sida cudurka fayraska corona, sida loo aqoonsado dacwada markuu dhaco, iyo sida si ku haboon loo fulliyaa tallaabooyinka IPC si loo hubiyo inaysan jirin gudbin dheeraad ah ee HCW ama bukaanada kale iyo dadka kale ee ku jiro xarunta daryeelka caafimaadka.
Tababarkaan waxaa loogu tallogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka bulshada, sida ay diirada saarto ka hortaga iyo xakameynta caabuqa.
Koorsadaan waxaa sidoo kale lagu helayaa luuqadaha xiggo:
English - русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - Tiếng Việt - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسی - සිංහල - ภาษาไทย -தமிழ் - Казақ тілі
Koorsadaan waxay dabooleysaa tallaabooyinka Ka hortaga iyo Xakameynta Caabuqa (IPC) ee looga baahanyahay in loogu:
Diyaar garoobo oo diyaar loogu ahaado ka jawaabida dilaaca, oo gaar ah, midka sabab la xiriirto COVID-19.
Xadey gudbinta aadane ku aadane oo qaab fullinta waxqabadyada WHO ku talisay ee IPC.
Aqoonso, gooniyey oo soo wargeli dacwadaha laga shakiyay iyo la xaqiijiyay.
Waxaa jiro illo ku lifaaqan qeyb walba oo kaa caawinayo ku bilaabida dheeraadka ah ee mowduucaan.
Dhameystirka koorsadaan, waa inay u suurtogashaa inaad:
qeexaan IPC iyo doorkeeda ee marxaalada u diyaar garowga, diyaarsanaanta iyo ka jawaabida;
sharax xaalada xakameynta cudurka COVID-19, oo ay ku jiraan sharaxaadaha dacwada iyo calaamooyinka iyo aastaamaha;
sharax isha xakameynta, xakameynada maamulka iyo xakameynada deegaanka iyo injeernimada;
sharax tallaabooyinka WHO-ku talisay ee IPC ee loogu tallogalay xarumaha daryeelka caafimaadka, oo ay ku jiraan markii lala macaamilayo dacwadaha la xaqiijiyay ee COVID-19;
sharax tallaabooyinka dheeraadka ah IPC ee la qaadayo si loogu caawiyo u diyaarsanaanta guud oo gudaha xarunta daryeelka caafimaad.
Muddada koorsada: Qiyaastii 1 saac.
Shahaadooyinka: Xaqiijinta Ka qeybqaadashada waa loo helayaa ka qeybqaatayaasha dhameystiro boqolkiiba 100% ee qoraalka koorsada.
Kadib dhameystirka koorsadaan, haddii aad xiiseyneysid wax ka barashada sida saxda ah ee loo gashto iyo looga saaro qalabka illaalada shaqsiga (PPE) ee marxaalada COVID-19, fadlan tixraac koorsada OpenWHO: COVID-19: Sida loo gashto oo looga saaro qalabka illaalada shaqsiga (PPE): https://openwho.org/courses/IPC-PPE-SO
Haddii aad xiiseyneysid wax ka barashada sida saxda ah ee loo sameeyo nadaafada gacmaha, fadlan tixraac koorsada OpenWHO: https://openwho.org/courses/IPC-HH-so
Loo fasiray af Soomaali ka bilow Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020. WHO masuul kama ahan tusmada ama saxnaanta fasiraadaan. Haddii ay dhacdo is waafaqsanaan la’aan u dhaxeyso fasiraada Ingiriiska iyo af Soomaaliga, nooca Ingiriiska asalka wuxuu ahaanayaa nooc ku xiran oo dhab ah.
Fasiraadaan maysan xaqiijin WHO. Illahaan waxaa loogu tallogalay barashada ujeedooyinka taageerada waxbarashada kaliya.
Qeybta 1: Diyaar garowga, diyaarsanaanta iyo IPC:
Qeybtaan waxay bixisa dulmarka tallaabooyinka Ka hortaga iyo Xakameynta caabuqa u diyaar garowga, diyaarsanaanta.
Qeybta 2: Fayraska COVID-19:
Qeybta 2 waxay bixisaa hordhaca fayraska COVID-19.
Qeybta 3: IPC ee marxaalada COVID-19 Taxadarada caadiga ah, taxadarada ku saleysan gudbinta iyo tallooyinka gaarka ah ee COVID-19:
Qeybtaan waxay dib u eegtaa taxadaro kala duwan oo loo qaadayo diyaarinta iyo ka jawaabida COVID-19.